Balaa gaddisiisaa biratti ofee ka'uun gara jabina ammamiiti? - BBC News Afaan Oromoo
Balaa gaddisiisaa biratti ofee ka'uun gara jabina ammamiiti?
5 Waxabajjii 2018
Image copyright ANSA/GIORGIO LAMBRI/QUOTIDIANO LIBERTA
Goodayyaa suuraa Namni osoo namni isa biraatti gaggabaa jiruu dhaabatee ofiin of kaasu kun miira namummaa waan qabu hin fakkaatu
Yeroo dubartiin lammii Kanaadaa tokko Kaaba Xaaliyaanitti balaa baaburaa irra ga'een kuftee gaggabdee jirtutti namoonni hojii baraaruu hojjetan oolchuudhaaf dafanii daandii seenan.
Namni itti dhiyoo jiru garuu dhimma balaa gaddisiisaa uumamee kana bira dhaabatee mobaayilii isaatiin suura ofiin of kaasaa jira.
Yeroo isaan hojii baraaraa hojjetaa jiran kanatti garuu dargaggeessi tokko naannoo sana dhaabatee suura ofiin of kaasa. Hojii dargaggeessa kanaa guutummaa biyyaa hedduu haarse.
Nama attam of jaallatudha laata? Osoo namni isa cinaatii lubbuuf wixxifachaa jiru dhaabatee ofiin of kaasuu maaliif nama hin haarsu.
Namichi ofiin suura of kaasaa ture kun ogeessa suuraatiin ka'eera. Ogeessi kun hedduu itti haaruun "Nuti guutummaan guutuutti naamusa dhabneerra, safuus daganneerra," jedha.
Poolisiin namicha dhaabatee ofiin of kaasu kana qabee akka inni suura sana haqu taasiseera.
Dubartiin lammii Kanaadaa balaan baaburaa irra ga'e kun gara hospitaalaa geeffamtee miilli tokko irraa citeera.
Dargaggeessichi fuula balaan sun itti qaqqabe Piyasenzaa jedhamutti mutaantaa daalacha uffatee mobaayilii isaatiin suura ofiin of kaasaa ture kun qorannoon irratti gaggeeffamee yakki qabatamaan hojjeteeru hin jiru.
Bakka dubartiin balaan baaburaa irra ga'e sana dhaabbatee yeroo ofiin of kaasaa jirutti namoota ishee oolchuudhaaf yaalaa jiran dabalatee suurri ka'e miidiyaa hawwaasummaa biyyatiirra hedduu baballatee namoota haarseera.
Koriya Dellaa Seeraa namni jedhamu namichi arka tokkoon suura of kaasaa, arka biraan ammoo mallattoo mo'ichaa 'V' osoo agarsiisuu mullata.
Namni biraan Qopheessaa Raadiyoo ta'e tokko maqaan isaa Nikoolaa Saaviinoo ammoo ilmi namaa "gara badisaatti gulufaa jira" jechuudhaan dhaggeeffatoota isaatti hime.
Namniu biraan fuula Tuwiiterii isaarratti "Kanaan booda waanumti ana ajaa'ibu hin jiru" jedha.
Gaazexeessaa Joorjiyoo Laambirii, namni dargaggeessa kana yeroo inni ofiin of kaasutti suura kaase ammoo, waan argeefi muuxannoo isaa Dilbata darbe Gaazexaa Piyasenzaa Liibertaa jedhamu mata-duree "Amala bulguu namni hin eegiin: ' balaa gaddisiisaa biratti suura ofiin of kaasuu'.
Laambiriin waanta uumame aanga'oota baaburaatti beeksisee booda maalummaan namicha kanaallee adda ba'ee kan barame.
Waanti hanga ammaatti ifa hin ta'iin jiru dubartittiin balaan irra ga'e kun akkamitti akka ta'edha.
Akka gabaasa yeroo sana turetti, kan ittiin karra baabura sanaa to'atan hojii ala ta'uun yeroo bakka sirrii hin taanetti karru kun banamu kufuun ishee akka hin oolledha. Haata'u malee, yeroo baaburri buufata keessaa ba'uuf jirutti qaqqabuudhaaf itti fiigdee ta'uu malas jedhamee shakkama.
Sirbitoonni obbolaa beekamoo xiyaara imaluu isaan dhorke himachuuf